Inona avy ireo taila fandroana malaza 2021 miaraka amin'ilay programa? Ireto endrika, fitaovana ary loko ireto, miaraka amin'ny taona vitsivitsy dia tsy lany andro!
Home / Blog / Inona avy ireo taila fandroana malaza 2021 miaraka amin'ilay programa? Ireto endrika, fitaovana ary loko ireto, miaraka amin'ny taona vitsivitsy dia tsy lany andro!
2021 / 03 / 28 FisokajianaBlog 3584 0
Lohatenin'ny fandroana Xiao Xin
Ny fahatsapana ny fanavaozana maoderina sy ny fiheverana manokana ny famolavolana ny habaka fandroana dia tsy misy farany, fa miverina amin'ny fotokevitra "azo ampiharina" tena izy, ny famolavolana ny fandroana na ny "teknolojia" hanaraka.
Ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tsotra, ny taila fandroana dia manaraka ireto fitsipika manaraka ireto hahatratrarana ny vokatra azo ampiharina indrindra.
Ny rindrina # misy taila matte tsotra dia hahatonga ny habaka ankapobeny tsy hatsiaka sy mafy.
Ny fampisehoana anti-slip dia tsy maintsy atao, ny fampiasana mats anti-slip, lamba firakotra anti-slip sns ... no tokony ho ny mofomamy amin'ny mofomamy fa tsy soloina.
# Safidio ny gorodona vita amin'ny gorodona izay lehibe loatra. Noho ny zoro marobe ao amin'ny efitrano fandroana dia hampitombo ny habetsaky ny fanapahana taila sy ny fako.
[Safidy voalohany natolotra]
Hafanana tsy misy famoizana ny hakantony
# Ho an'ny taila mahazatra, ny taila tsotra dia mora vidy kokoa, ary ny taila voninkazo dia misy vokany matanjaka kokoa. Azonao atao ihany koa ny misafidy taila vita amin'ny hazo, ny hafanana voajanahary dia fitaovana lehibe hanatsara ny fomban'ny habaka. Ny efitrano fandroana dia afaka misafidy ny hanitatra voa kely hazo, ny toetrany bebe kokoa ary mahomby kokoa.
# Mety ho an'ny olona maherin'ny 25 taona, mafana sy kanto
[Fizarana faharoa natoro]
# Fomban'ny sombin-tany mivelatra, hazavana maivana mahatonga ny toerana fidiovana ho mamirapiratra ary tsy hahavery endrika, azo refesina ny safidin'ny felam-boninkazo.
# Mety amin'ny 20-30 taona, ny fikatsahana ny fahatsorana, ny hakantony ary ny fomban'ny tanora sinoa maivana, indrindra ho an'ireo vehivavy 25 taona miakatra no midina
[Safidy telo natolotra]
Ny kilasika mainty sy fotsy izay tsy mandeha tsy mety
# Ireo taila lehibe roa, maizina sy maivana, na ampiasaina miaraka na irery, dia afaka maneho ny fahatsapana ny antonony.
# Mety amin'ny sokajin-taona 25-40 taona, ny fikatsahan'ny olona tsotra
[Programme Recommended IV]
Fihetseham-po amin'ny fomba eropeana
Ny lalao eoropeana + fahagola dia saika ilay “mpanjaka nandrehitra vola” tamin'ny taila, nandova ny fanamaivanana eoropeana kilasika izay maodely maromaro ny andilany. Ny lamina, ny loko ary ny famirapiratany dia mirona amin'ny fiterahana ny mahazatra sy mahazatra. Ny taila voninkazo dia mitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny fampifanarahana, noho izany ny fahatsapana ny fampiasana taila voninkazo sy ny tsy fampiasana taila voninkazo dia toy ny tsy itovizan'ny kinova mora vidy sy ilay kinova mihaja sy malaza. Miomàna fotsiny handoa izany.
# Mety ho an'ny olona mihoatra ny 30 taona, misokosoko ary tia kanto tandrefana
Previous :: Ny iray ihany dia efitra fandroana kely, maninona ny olona no nametraka fomba sy toetr'andro! Next: 2021 Lokon'ny fandroana miaraka amin'ny, manaova veloma ny estetika "eto an-tany", avelao "handoko" ny tranonao!
Sahirana, mpanaingo no nanome ireto famolavolana vavahady manaitra ireto
220㎡ Trano ambany rihana ambany rihana ambany rihana ambany, endrika maoderina | Hongfu Gauge Design
Haingon-trano fandroana amin'ireo 16 "Andriamanitra dia manome antsipiriany", manao ny mety, ...
Ny voalohany eto an-tany! Soa fandroana mipetraka an-trano azo antoka sy mahasoa, hahafahanao "...
2021 / 04 / 22 3760
Sarobidy loatra loatra koa ireo trano fandroana ireo, efa hitanao ve izy rehetra?
2021 / 04 / 21 3687